Wararka - XUSUUSIN NAXDIN LEH: Kaydka saxarka caalamiga ahi waa degdeg!Maraqyada nadaafadda, xafaayadaha, tuwaalada waraaqaha ayaa dhamaantood kor u kacaya
Skaha, oo ah maamulaha Suzano SA, soo saaraha saxarka ugu weyn adduunka, @6th May, ayaa sheegay in kaydka saxarka ay si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacayeen, carqaladaynta saadkana ay u badan tahay inay dhacaan mustaqbalka, ama ay horseedaan qiimaha sare ee waxyaabaha daruuriga ah sida tuwaalada waraaqaha iyo nadaafadda. xafaayadda iyo xafaayadda.
Tan iyo bilowgii sanadkan, waxaa jiray codad badan oo ku saabsan kor u kaca qiimaha alaabta waraaqaha.Sidee buu wax qabadku yahay suuqa?Bishii Abriil, tiro ka mid ah shirkadaha waraaqaha gudaha ayaa sheegay in arrimo ay ka mid yihiin qiimaha alaabta ceeriin iyo kharashka gaadiidka awgeed, noocyada waraaqaha qaarkood ay kor u kaceen 300 ilaa 500 yuan halkii ton.Waxaa sidoo kale sare u kacay qiimihii waraaqaha musqulaha iyo maraqyada nadaafadda oo inta badan loo isticmaalo nolosha dadka, kuwaas oo u dhexeeya 10% ilaa 15%.
Inkasta oo shirkadaha alaabooyinka waraaqaha ah ay dejiyeen "qiimaha qiimaha", laga soo xigtay warbixinnada maaliyadeed ee ay shaaca ka qaadeen shirkadaha la xidhiidha, isbeddelka qiimaha alaabta ceeriin ayaa cadaadis saaray waxqabadka shirkadaha la xidhiidha.
Soo saaraha saxarka ugu weyn adduunka ayaa ka digaya: kaydku kuma filna
Suzano SA, oo xarunteedu tahay Brazil, waa wax soo saarka saxarka ugu weyn adduunka.Madaxa shirkadda Skaha ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta 6-aad ku sheegay in Ruushka uu yahay isha muhiimka ah ee alwaax ee Yurub.Sababo la xiriira kor u kaca colaadda u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraine, alwaax u dhexeeya Ruushka iyo Yurub Ganacsiga ayaa gebi ahaanba la xannibay.
Awoodda wax-soo-saarka saxarka Yurub, gaar ahaan Scandinavianka (Denmark, Norway, Sweden), waa la xakamayn doonaa."Suuqyada saadka ayaa si tartiib tartiib ah u sii yaraanaya waxayna ku sii jeedaan carqaladaynta saadka.(Khashooyin) waxay u badan tahay inay dhacaan," Skaha ayaa yidhi.
Xitaa ka hor inta uusan dillaacin iskahorimaadka Ruushka iyo Yukreeniyaan, suuqa saxarka ceeriin ayaa horeyba u ahaa mid adag.Dhibaatada awoodda weel la'aanta ayaa si gaar ah ugu ba'an Brazil, halkaas oo tiro badan oo sonkor ah, soybean iyo kafeega la sugayo in la dhoofiyo, taasoo horseedaysa kororka qiimaha xamuulka.
Ka dib markii uu dillaacay iskahorimaadka Ruushka iyo Yukreeniyaan, qiimaha cuntada iyo tamarta ayaa kor u kacay, taas oo aan kordhinayn qiimaha gaadiidka ee saxarka Brazil, laakiin sidoo kale waxay cadaadisay awoodda gaadiidka ee saxarka cuntada.Qiimaha maraqyada nadaafadda, xafaayadaha iyo warqadaha musqusha ayaa kor u kici doona, taasoo dhibaato cusub ku keenaysa macaamiisha.
Baahida loo qabo saxarka Latin America ayaa qarxinaysa, laakiin soosaarayaasha gobolka ayaa ka dhamaaday meel ay ku qaataan amarro cusub iyo warshaduhu waxay durbaba si buuxda ugu shaqeeyaan.Skaha wuxuu sheegay in baahida loo qabo saxarka ay muddo dheer ka sarraysay awoodda shirkadda.
Skaha ayaa intaa ku daray in alaabooyinka nadaafadda ay yihiin waxyaabaha lagama maarmaanka u ah nolosha, xitaa haddii qiimihiisu sare u kaco aysan saameyn ku yeelan doonin baahida suuqa.
suufka Nadaafadda, Ion Napkin Fayadhowr Xun, suufka Nadaafadda Dumarka, Lady Pads, Tuwaalada Nadaafadda ee Haweenka Jilicsan, suufka nadaafadda 245mm,